Dagaal Sharci Daro ah Lagu Qaaday Dagaanka Soomaalida – Rasaasa News
Jijiga, Aug 14, 2018 – Dagaanka Soomaalida waxaa muddo labo todobaad ah ka jira, wareer, xiisado siyaasadeed iyo isaamin daro. Xiisadahan jira waxaa sabab u ah hogaanka cusub ee Itoobiya, kaas meesha ka saaray shacigii iyo kala dambayntii muddada dheer ka jirtay dagaanka Soomaalida.
Abiy Axmed oo ilaa iyo haatan ayna fahmin dadka reer Itoobiya dhinaca ay u socoto siyaasadiisu, ayay dadku ka walbahaarsan yihiin hudanti la,aanta ka jirta dalka.
Dadka la socda siyaasadaha qoomiyada ku dhisan ee ka jira Itoobiya ee kolba qoomiyad gacanta u gala, ayaa saadaalinaya in maanta ay siyaasada Itoobiya gacanta u gashay qoomiyad aan hore uga arimin Itoobiya, taas ayaana keenta sugnaan la,aanta siyaasada Itoobiya.
Abiya Axmed kolkii uu noqday Raysal wasaaraha, wuxuu wada cafiyey dhamaan maxaabiistii u xidhnay siyaasada, waxayna u badnaayeen Oromo. Dabcan kuwii kalena wuu raaciyey.
Abiy Axmed, talaabadii xigtay waxay noqotay in uu ka saaro liiska arggagixisonimada ururadii mucaaradka ahaa ee ay ugu waynayd OLF oo Oromo ah. Dabcan wuu raaciyey ururadii kale ee mucaaradka ahaana.
Talaabadii xigtay waxay ahayd in uu weerar ku qaado dagaanka Soomaalida oo ahaa dagaanka ugu nabdoon dagaanada Itoobiya. Sabab cad oo maanta uu sheegayna ma jirto, laakiin waxaa laga garan karaa talaabooyinka uu qaadayo maanta.
Madaxwayne Cabdi Iley, waxaa lagu khasbay in uu iscasilo, wuu yeelay waxaana xisbiga dhaxdiisa laga doortay madaxwayne cusub Axmed Cabdi. Maalin ka dib waa la xidhay Cabdi Maxamud Iley isaga oo wali ah gudoomiyah XDSHI.
Labo maalmood ka dib, waxaa Addis Ababa, si shaci-daro ah looggaga yeedhay 47da xubnood ee uu ka kooban yahay XDSHI. Faragalintan oo aan sharciga fadaraalka Itoobiya meela kaga jirin, cid kale oo sidan loola dhaqmayna ayna jirin ayey guud ahaan Itoobiya la yaabantahay.
Waxaa la sheegayaa in si xun oo bahdil ah loola dhaqmay xubnihii XDSHI ee Addis Ababa la keensaday. Sida la sheegayo, W
waa lagu caraatamay xubnaha xisbiga, waa loo hanjabay iyaga oo lagu yidhi kuligiin dambiilayaal baad tihiin, waana la idin abaal marin. Waxaa lagu khasbay in ay si sharci daro ah ku doortaan Axmed Shide oo ah wasiirka warfaafinta dawlada fadaraalka Itoobiya, wixii hada ka dambeeyana ay ka amar qaataan Axmed Shide.
Waxaa haatan ka socda magaalada Addis Abab, cidii uu Abiy Axmed dagaanka Soomaalida uga dhigi lahaa madaxwaynaha. Odayaal iyo dad indheer garad ah ayaa ku doodaya Madaxwaynaha xilka loo doortay maalmo ka hor waa in aan la faragalinin loona daayo in uu dhamaysto labada sano ee ka dhiman doorashada dalka.
Abiy Axmed, waxaa uu kilkisha ku wataa xubno qurbo joog ah, oo ay wadashaqayn jireen Jawhar Maxamed. Jawhar Maxamed oo ka mid ah mucaaradka Oromada ayaa Abiy Axmed farata ugu fiiqaya sharci darada uu ka wado guud ahaan Itoobiya gaar ahaan dagaanka Soomaalida.
Itoobiya ka mid ma ha dalalka ay dadkeedu qaadan karaan labo sharci (dual nationality). Qofka qurbo jooga ah waxaa la siiyaa (Diaspora card) warqad Vissa ah oo dalka uu ku joogi karo shan sano (5). Qofka qurbo jooga ah ma codayn karo, siyaasadna hadalkeedba da,aa. Waxaase loo ogol yahay in uu ka ganacsado kana shaqayn karo dalka.
Sharciga sidaas ah dad ku jooga Itoobiya, ayuu Abiy Axmed u kala tuuray maamulkii dagaanka Soomaalida in si gacan ku rimis ah uu ismaamulka Soomaalida ugu dhiibo, kalana tashado arimaha siyaasada ee dagaanka.
Abiy Axmed Sharciga Itoobiya u yaal wuxuu astaahilaa in la xidho.!!!
Xisbiyada maamula Dagaanada Itoobiya, waxaa lagu doortaa doorashada guud ee ka dhacda dalka.
XDSHI, waxaa lagu doortay doorashadii guud ee ka dhacda dagaanka Soomaalida Itoobiya, Waxaana laga dhaxdoortaa baarlamaanka dagaanka.
Hadaba, xagay kaga taalaa sharciga Itoobiya in doorashada Xisbi dagaan ka dhacdo Addis Abab, dawlada fadaraalkuna waxa ay doonto ay soo galiso cida ay doontana ka saarto.
Dagaanka Soomaalidu dulmi xoog leh ayuu ku qabaa fadaraalka beenta ah ee maalinba qoomiyadi fuulayso. Waxaa lagu hayaa qoomiyada Soomaalida adoonsi iyo xoog wixii la doono lagu sameeyo.
Waxaan u sheegayaa dadka ku murmaya aniga ha la i geeyo iy aniga ha la i geeyo, inta aad cid ka baryaysaan in ay meel ku gayso in aad ogaato in marka dambe ay si foolxun kaaga qaadi, dadkaagana aad dulmayso.
Fadlan u sheega Abiye iyo Oromadiisa in ay iidiin daayaan in aad danihiina ka tashataan sida qoomiyadaha kale ee Itoobiya.